Lwesine 1 Apreli 2021
Usofa I-sofa le-Shell livele njengengxube yemidwebo yamagobolondo olwandle kanye nemfashini yokulingisa ubuchwepheshe be-exoskeleton kanye nokuphrinta kwe-3d. Injongo bekuwukudala usofa onomphumela wokukhohlisa okukhona. Kufanele kube ifenisha ekhanyayo ne-airy engasetshenziswa kokubili ekhaya nangaphandle. Ukufeza umphumela wokukhanya okukhanyayo kwakusetshenziswa i-web yezintambo ze-nylon. Ngakho-ke ubulukhuni besidumbu bulinganiselwe ukusikwa nobunono bezintambo ze-silhouette. Isisekelo esiqinile ngaphansi kwezingxenye zekhoneni zesihlalo singasetshenziswa njengamatafula aseceleni nezihlalo ezithambile zaphezulu nezivikelo eziqeda ukwakheka.
Lwesithathu 31 Mashi 2021
Indawo Yokudlela I-Chuan's Kitchen II, ethatha zombili izinhlaka zobumba ezimnyama zeSichuan Yingjing nezinsimbi zomhlabathi kusuka ekwakhiweni metro njengendawo ephakathi nendawo, iyindawo yokudlela yokuhlola eyakhelwe ekuhlolweni kwesimanje kobuciko bendabuko. Ihamba ngomngcele wezinto zokwakha futhi ihlola uhlobo lwesimanje lobuciko bendabuko yabesilisa, abakwa-infinity Mind bakhiphe la ma-gaskets alahlwe ngemuva kokudubula inqubo kagesi ka-Yingjing omnyama, bawasebenzise njengezinto eziphambili zomhlobiso ekhishini likaKukan's Kitchen II.
Lwesibili 30 Mashi 2021
Isitulo Sohlalo Siyizinhlobo Ukugcizelelwa okuyinhloko komklamo wezihlalo ze-infinity kwenziwa ngokunembile kuma-backrest. Kuyinkomba yesibonakaliso se-infinity - isibalo esibuyiselwe kwabayisishiyagalombili. Kunjengokungathi ishintsha ukwakheka kwayo lapho ijika, ibeka amandla emigqa futhi iphinda isayine uphawu lwe-infinity ezindizeni eziningana. I-backrest idonswa ndawonye ngamabhande amaningana okuqina akha i-loop yangaphandle, nayo ebuyela isibonakaliso se-cyclic engapheli yempilo nokulinganisela. Ukugcizelelwa okwengeziwe kubekwe emilenzeni eyingqayizivele yemilenze-yesikhumba eyalungisa ngokuphephile futhi isekele izingxenye eziseceleni zesihlalo esinamasheya njengoba kwenza ama-clamp.
Msombuluko 29 Mashi 2021
I-Cafe Ukuphendula isikhashana ngengqayizivele yanamuhla, yobuhle obuhlanzekile, ingaphakathi eliphefumulelwe amakhreyithi ezithelo zokhuni asetshenziswa kwifomu elakhiwe. Amakhreyithi agcwalisa izikhala, enza ifomu elicwengekile, elicishe lifane nomhume, nokho elikhiqizwe kusuka kubumbeko bejometri elula neqonde. Umphumela uba okuhlangenwe nakho kwendawo okuhlanzekile nokulawulwa. Idizayini ehlakaniphile futhi yandisa isikhala esilinganiselwe ngokuguqula ukulungiswa okusebenzayo kube izici zokuhlobisa. Izibani, izinkomishi kanye namashalofu kufaka isandla kumqondo wokuqanjwa nokubuka okubukekayo.
Isithombe Esikhanyayo Se-Crystal
Sonto 28 Mashi 2021
Isithombe Esikhanyayo Se-Crystal Ihlanganiswe ngokhuni kanye ne-quartz crystal, lesi sikhanyiso esikhanyayo sisebenzisa ukhuni oluhlanzekile oluvela esitokisini sokhuni oludala lweTeak. Sikhishwe amashumi eminyaka yilanga, umoya kanye nemvula, izinkuni zibese zibunjiwe, zigqitshwe, zishiswe bese ziqedwa emkhunjini wokubamba izibani ze-LED nokusebenzisa amakristalu e-quartz njengesixhobo semvelo. I-100% yamakristalu e-quartz yemvelo engasetjenziswanga asetshenziswa kwisithombe ngasinye futhi acishe abe yizigidi ezingama-280 ubudala. Amasu ahlukahlukene wokuqeda izinkuni asetshenziswa kubandakanya indlela ye-Shou Sugi Ban yokusebenzisa umlilo ukulondolozwa nombala ohlukile.
Mgqibelo 27 Mashi 2021
Ukukhanyisa Ukwakheka kwesibani Capsule siphinda isimo samakhompiyutha asabalele kakhulu ezweni lanamuhla: imithi, izakhiwo zokwakha, umkhathi, ama-thermoses, amashubhu, amaphaphu wesikhathi adlulisa imiyalezo ezizukulwaneni eziningi amashumi eminyaka. Kungaba ngezinhlobo ezimbili: okujwayelekile nokunwebekile. Izibani zitholakala ngemibala eminingana enamazinga ahlukahlukene wokubonakala. Ukubopha ngezintambo ze-nylon kunezela umphumela ophathelene nokwenza isibani. Uhlobo lwayo lwendawo yonke bekuwukucacisa ukuthi kulula kokwenza nokukhiqiza ngobuningi. Ukulondolozwa kwinqubo yokukhiqiza yesibani inzuzo yayo enkulu.
Smartstreets-Cyclepark™ Ukuguqulwa Kokupaka Ibhayisekili Lwesine 16 Septhemba
Insect Sculptures Ukukhangisa Lwesithathu 15 Septhemba
Ane Isihlalo Lwesibili 14 Septhemba
Usofa Indawo Yokudlela Isitulo Sohlalo Siyizinhlobo I-Cafe Isithombe Esikhanyayo Se-Crystal Ukukhanyisa